Archive du 20180706
Pastera Mailhol Tohanan’ny firenena Rosianina, hitaky ny îles éparses
Vonona ny hanohana sy hanampy an’i Pastera Mailhol amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hotanterahina eto amintsika ny 7 novambra ho avy izao ny firenena Rosianina. Omaly no nampahafantarany izany tamim-pomba ofisialy teny amin’ny By-pass misy ny foiben-toeran’ny antoko politika Gideona Fandresena Fahantrana eto Madagasikara izay nanolotra azy,
Hery Rajaonarimampianina Mitady ho takon’i Dama
Nanomboka ny alahady teo, taorian’ny nanambaran’i Zafimahaleo Rasolofondraosolo na Dama Mahaleo,
Mpankato fanorenana ifotony Haneho ny heriny anio
Hifampitaona etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina avokoa, anio ireo vovonana, fikambanana, antoko politika sy izay heverina ho mpankato ny hanatontosana ny fanorenana ifotony rehetra mialoha ny hirosoana amin’ny fifidianana.
Famatsiam-bola amin`ny fampielezan-kevitra Ho vita ara-potoana ve ilay fanaraha-maso ?
Ny lalàmpanorenana dia milaza mazava fa tokony hisy lalàna hafa mamaritra ny famatsiam-bolan`ny antoko politika. Miainga any amin`io avokoa mantsy ny zavatra rehetra.
Fifidianana sy raharaham-pirenena “Favori” foana izay mahazaka an’Iarivo
Tsy azo hiadian-kevitra fa manana ny toerany lehibe eto Madagasikara Antananarivo amin’ny maha revivohitry ny firenena azy.
Tapaka ary ny daty hanaovana ny fifidianana Ilay andro nodradraina mafy hisian'ny fanovàna. Toa maromaro ihany ireo mikasa hofidiana Na bodo na adala samy mba naneho ny vinavina.
Hetsiky ny sendika etsy sy eroa Misy olona manohana ao an-damosina ?
Mitohy hatrany ny hetsiky sy ny fitakian’ireo sendika maro manerana ny Nosy. Tsy misy valiny mahafa-po mihitsy azonay, hoy ireo avy ao amin’ny sendikan’ny fadin-tseranana sy ny hetra.
Tsenan’ny asa eto Madagasikara Tsy maharaka ny fahamaroan’ireo mahazo diplaoma
Nahatratra 1247 ny orinasa nitsangana tamin’ny taona 2017 saingy vitsy hatrany ny mpiasa raisina. 10 ka hatramin’ny 20 eo no raisin’ireny orinasa madinika sy salantsalany ireny.
Findramam-bola eny amin’ny banky Mbola mampatahotra ny mpanjifa maro
Mbola mampatahotra ny mpanjifa maro ny findramam-bola eny amin’ny banky ankehitriny.
Tontolon’ny fitsarana Mpitsara 50 hanao fianianana anio
Mpitsara miisa 50 nahavita fianarana tao amin’ny Sekoly ambony manofana ho mpitsara sy mpiraki-draharahan’ny fitsarana na ny ENMG no havoaka anio, ka hanao fihanianana eo anatrehan’ny Fitsarana Tampony.
Miteraka ahiahy ny momba ny fahefan’ny fitsarana Malagasy hoe afaka hanoatra eo amin’ny raharaham-pitsarana momba ireo teratany Frantsay ve manoloana ny famatsiana volabe hatrany amin’ny 5 tapitrisa Euros (19 miliara ariary eo) tsy haverina avy amin’ny AFD (Alliance Française de Développement).
Fiatrehana ny rivodoza Mila fanampian’ny mpiara-miombon’antoka hafa
Notanterahana omaly tetsy amin’ny birao nasionaly misahana ny fisorohana sy fihatrehana ny loza eto amintsika na BNGRC etsy Antanimora ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasan’ity rafitra ity sy ny rafitra iraisam-pirenena misahana izany na ny Medair.
Mondial 2018 Hisy roa hangoron-damba indray anio
Hanomboka anio zoma 06 jolay ireo lalao 1/4-dalan’ny Mondial 2018 tontosaina any Rosia ka amin’ny 17:00 : France- Uruguay, any Nijni Novgorod (Q1) ary amin’ny 21:00 : Brésil - Belgique, any Kazan (Q2)
Betafo Antsirabe Am-perinasa ny “Ecole de Foot-ball FIBEMIH”
Fanomeza-tanana ny mpiara-belona amin’ny fanampiana ara-tsosialy sy ara-panabeazana ary fampiofanana isan-karazany ny tanora no nimasoan’ny FIBEMIH na ny FIkambanan’i BEtafo MIray Hina, tao anatin’ny 14 taona nijoroany.
Izay iray trotraka aloha e !
Mitohy ny tolona sy ny fitakiana amin’ny endriny samihafa, saingy tsy misy aloha ny tena vahaolana. Bemarenina sy fanamaivanana rahateo no tena setriny, izay vao mainka mandranitra ireo mpanao fitakiana izay miha mahazo hery hatrany indray amin’izao fotoana izao.
Mikorontana ny fampianarana Manangasanga ny taona fotsy
Nambaran’ny minisitry ny fanabeazana Horace Gatien ny takarivan’ny 4 jolay teo, fa roa andro maninjitra no nikaon-doaha ny solontena 8 avy amin’ny sendikan’ny mpampianatra niaraka tamin’ny solontenan’ny minisitera voakasika dia teknisianina miisa 3.
Fotoan-dehibe indray no iarahan’i Lalatiana amin’ny mpankafy azy etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny 15 jolay izao. Elaela tsy nifankahita tamin’izy ireo ity mpanakanto ity ka dia ny alahady io izany no hihaona.
Vidin-tsolika eto Madagasikara Midangana noho ny hetra alain’ny fanjakana
Mampikaikaika ny mpanjifa hatrany ny vidin-tsolika misy eto Madagasikara. Misondrotra foana ary rehefa mba midina dia zara raha milatsaka ka tsy mipaka amin’ny sarambabem-bahoaka izany.
Trano fivoahana Malagasy 7, 8 tapitrisa no tsy manana azy
Mbola mahatratra 7, 8 tapitrisa ireo olona tsy manana trano fivoahana manerana ny Nosy raha mahatratra 25 tapitrisa eo ho eo ny Malagasy rehetra Saika manao maloto an-kalamanjana avokoa izy ireo na koa manary maloto any anatin’ireny tata-drano maro isan-karazany ireny.
Fanamboarana moto scooter Asa mahavelona, mahazo 15.000 Ar isan’andro …
Mihamahazo vahana eto amintsika ny asa fanamboarana môtô scooter ankehitriny.